China Fiber galaas dhogorta kuleylka kuleylka dhogorta iyo soosaarayaasha |Kingflex
Alaabta Xakamaynta Xumbo-caageedka
Duubista xaashida dahaarka ee caagga ah
Tuubbada Xakamaynta Xumbo-caag
Qalabka Dahaarka Xumbo-caageedka
Alaabta Dahaarka Cryogenic
Alaabta Dahaarka ee Bilaashka ah ee Halogen
Alaabta Dahaarka Nuugista Codka
Alaabta Dahaarka dhogorta
Alaabta Dahaarka Dhagaxa Duufaanta
bustaha dahaarka kuleylka dhogorta fiber galaas
♦-xakamaynta kulaylka iyo ilaalinta kulaylka
♦ Nuugista codka iyo dhimista qaylada
♦ Dabacsanaanta kulaylka oo deggan
♦ Hydrophobicity aan ka yarayn 98%, iska caabin qoyaan joogto ah
♦ Wax qabad aad u wanaagsan oo aan dabka lahayn-aan dabci karin CLASS A
♦ Ma jiro qiiq iyo gaas sun ah oo sii daaya
♦ Iyadoo la raacayo xeerarka dhismaha cagaaran
Bustaha dhogorta leh ee Kingflex ma aha kuwo guban kara, kulaylka iyo dhawaaqa.Ma jiro wax sii daaya gaas sun ah marka uu dabka soo gaaro sidaas awgeedna waa mid ka mid ah xulashooyinka deegaanka ugu fiican ee dahaarka dhammaan adeegyada dhismaha.
Duubka aluminiumka ee u jeedda buste dhogorta dhalada ah ayaa sidoo kale diyaar ah.
Kingflex aluminium aluminium ee u jeeda buste dhogorta dhalada ah waa in la buuxiyo baahida suuqa ee heerarka sare ee qalabka dhismaha ilaalinta deegaanka iyo cagaarka, lagana fogaado waxyeelada formaldehyde, phenol iyo walxaha kale ee waxyeelada leh ee jirka iyo deegaanka aadanaha.Waxaa intaa dheer, bustaha dhogorta leh ee aluminium ee Kingflex waxay ilaalin kartaa waxqabadka kulaylka wanaagsan iyada oo aan loo eegin jawiga heerkulka sare ama hooseeya.
Celceliska dia fiber-ka
Biyaha ku jira
Fasalka Aan guban karin
Heerkulka dib u soo celinta
Isku dhafka nuugista codka
1.03 habka reverberation alaabta 24kg/m3 2000HZ
Waxyaabaha ka mid ahaanshaha Slag
Tilmaamaha iyo Cabirka
Bustaha dhogorta leh ee dahaarka
※ Qaybta A dab-demiska
※ Wax isbeddel ah oo cabbirka ah ma jiro haddii ay soo gaadhaan kulaylka iyo qoyaanka
※ Ha ku daalin wakhtiga, suuska, caaryada, daxalka saameeya ama oxidize.
※ Aanay garaacin dhiqlaha iyo noolaha yaryar.
※ Aan la jeexjeexin inta lagu guda jiro codsiga ama la yareeyo qashinka sababtoo ah sifooyinka muraayadda.
※ Si fudud ula qabsada nooc kasta oo alwaax ah iyo saqafka birta ah.
※ Si sahal ah ayaa loo geeyaa saqafka oo lagu dabaqo adigoo jarjaraya.
※ Waarta oo ka soo horjeeda aashitada.
※Waxay hoos u dhigtaa isticmaalka shidaalka ee dhismooyinka xaddi laxaad leh.
※ Waxay u shaqeysaa sida go'doominta dhawaaqa iyo sidoo kale go'doominta kulaylka leh sifadeeda ilaalinta gariirka.
Bustaha dahaarka dhalada ee Kinflex waxaa loo isticmaali karaa dhismaha saqafka, nidaamyada HVAC.
Marka loo isticmaalo dahaadhka saqafka, lama jeexjeexin inta lagu jiro codsiga ama la yareeyo qashinka sababtoo ah sifooyinka muraayadda.Oo si fudud ula qabsanaya nooc kasta oo alwaax ah iyo saqafka birta ah.Sidoo kale iftiinka iftiinka awgeed, si fudud ayaa loo geyn karaa saqafka oo lagu dabaqi karaa iyada oo la jarayo. Way adkaysanaysaa aashitada. Waxay hoos u dhigtaa isticmaalka shidaalka ee dhismayaasha qadar weyn.
Marka loo isticmaalo hababka HVAC, bustayaal dhogorta ka samaysan oo dhinac ka mid ah ay ku daboolan yihiin uumiga Aluminium ee aan la nadiifin karin.Waxa kale oo ay u dhaqantaa sida go'doominta dhawaaqa iyo sidoo kale go'doominta kulaylka iyada oo sifo ilaalinaysa gariirka.Gaar ahaan hababka qaboojinta, daahankan aluminium aluminiumku wuxuu aad muhiim ugu yahay khatarta musuqmaasuqa ee ku-meel-gaadhka wakhtiga.Waxay u ogolaataa si sahlan oo degdeg ah codsigeeda biinanka dayactirka is-xajinta.
Bustaha dhogorta dhalada ah ee Kingflex waxaa loo isticmaali karaa kulaylka iyo dahaarka dhawaaqa tuubooyinka xaalada hawada, nidaamyada tamarta qoraxda, saqafka iyo nidaamyada HVAC.
Hore: xaashida dahaarka kulaylka nuugista dhawaaqa
Xiga: fiber galaas dhogorta dahaarka kulaylka
Busto dahaarka ugu fiican
Dahaarka dhogorta dhalada ayaa laga dareemay hal dhinac oo aluminium ah
Dahaarka dhogorta dhalada ayaa laga dareemay FSK
Dahaarka gidaarka Filibiin
fiber galaas dhogorta dahaarka kulaylka
Cinwaanka: No. 82 Huaxiang Road, Langfang Dhaqaalaha iyo Horumarinta Tignoolajiyada Gobolka Hebei, 065001, Shiinaha.